Bangiga Dhexe oo beeniyay eedeynta loo jeediyay Bangiyadda | KEYDMEDIA ONLINE
Bangiga Dhexe oo beeniyay eedeynta loo jeediyay Bangiyadda
Guddiga khubaradda ee Gollaha Amniga ayaa diyaariyay Warbixinta oo uu daabacay maalmo kahor Wargeyska New York Times, oo laga leeyahay dalka Mareykanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa soo saarey war qoraal ah oo uu ku beeniyay warbixintii gudiga khubaradda Gollaha Amaanka ee ku eedeysay qaar kamida bangiyadda dalka inay akoonno u fureen Al-Shabaab.
War-saxaafadeed ayaa lagu sheegay inaysan jirin wax cunaqabateyn ah ama culeys dhaqaale oo lagu soo rogi doono bangiyadda dalka kadib warbixintaas, oo Bangiga Dhexe ku tilmaamay war "been abuur" ah, oo sal iyo raad-toonna lahayn.
Dhanka kale, mid kamid ah bangiyadda la eedeeyay ayaa ka jawaabaya warbixinta, iyadoo uu sheegay inuusan waligiis u furin koonto shaqsi ama hay'ad cunaqabateyn saarantahay, iyo inuu qaaday talaabooyin aan la cayimin oo ka dhan ah xisaabaadka shakiga leh.
Xaaladda amni ee dalka iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan shirkadda ganacsiga gaarka loo leeyahay ayaa ku qasabi kara inay u hogaansamaan amaradda Al-Shabaab, si ay u badbaadsadaan hantidooda iyo nolosha shaqaalahooda.
0 Comments Topics: al-shabaab gollaha amaanka muqdisho soomaaliya